एक्कासी ४० प्रतिशत ले घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मूल्य, हेर्नुहोस् कति पुग्यो ! – Kavrepati
Home / आर्थिक / एक्कासी ४० प्रतिशत ले घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मूल्य, हेर्नुहोस् कति पुग्यो !
admin 1 week ago	आर्थिक Leaveacomment 115 Views
सडक सञ्जाल नजोडिएको हिमाली जिल्ला हुम्लामा खाना पकाउने ग्यासको मूल्य घटेको छ तर मूल्य घट्दा पनि प्रतिसिलन्डिर आठ हजार रुपियाँ तिर्न उपभोक्ता बाध्य छन् । जिल्लाका दक्षिणी क्षेत्रका तीनवटा गाउँपालिका राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएपछि ४० प्रतिशत मूल्य घटेको हो । एउटा ग्यास सिलिन्डरको मूल्य आठ हजारमा झरेको स्थानीय जयदेवी शाहीले बताइन् ।
अन्य समाचार : त्यसपछि मोटी केटि संग…… तपाई अधिकाशं महिलालाई आफ्नो वजन अर्थात मोटोपन घटाउन चिन्तित रहेको पाउनु भएको होला ।
Previous युवतीले गरिन् बाँदरसँग अनैतिक कार्य (भिडियो हेर्नुहोस्)
Next श्रीमतीलाई सधैं श्रीमानको बाँया तिर सुताउनुहोस् जीवनमा आउँनेछ चमत्कारी बहार
हुन्डाई क्रेटाको लोकप्रियता लगातार रुपमा चुलिदो छ । विभिन्न भेरिएन्टमा उपलब्ध क्रेटाको हाल उपलब्ध भेरिएन्ट …